Iindaba-Umatshini wokuThengisa iRobhothi weLiyuan
Umatshini wokuThengisa iRobot Welding yeLiyuan
U-Liyuan uyaqhubeka nokuphuhlisa umgangatho ophezulu wokugcina inkqubo kunye neepelethi zentsimbi, ukusukela kunyaka ophelileyo, umzi-mveliso wethu uthenge iiseti ezininzi zomatshini wokuwelda ngokuzenzekelayo kunye nomatshini wokuwelda iirobhothi. Ngosuku olunye iiyure ezisibhozo zomsebenzi, umatshini omnye wokusetha unokujija i-600pcs yebhokisi yebhokisi, okanye ii-800pcs i-P beam boram (inyathelo lebhokisi). Kwaye wonke umatshini osebenza kunye, unokuvelisa amawaka emitha ngosuku. Xa kuthelekiswa ne-welding yesandla, eyona nto ikhawulezayo ngakumbi, ebaluleke kakhulu, umgangatho we-welding unokuqinisekiswa.
Njengoko ngezantsi umfanekiso, teardrop pallet imiqadi yokubeka, ezisetyenziswa ngokubanzi kwindawo American kwaye oku umhambisi yethu clients.We sebenzisa umatshini oluzenzekelayo weld iintsipho kunye kunye umqadi, kubonakala yomelele, tyaba, kwaye akukho slag iwelding. Emva komgubo we-powder, umphezulu we-welded beam uya kuba mhle ngakumbi xa kuthelekiswa neendlela zokuwelda zesiko. Unxibelelwano olomeleleyo lwe-welding, luya kuyenza yonke inkqubo yokurhabaxa komsebenzi okanye inkqubo yeshelfu yomsebenzi
Kwinyanga ephelileyo, sifumana iodolo enkulu yentsimbi, evela eTshayina inkampani edumileyo "iZhengtai", kwaye sisebenzise iarc welding robot ukuyenza. Siye sayikhangela irobhothi kuhlobo oludumileyo lwaseJapan "iKawasaki". I-Arc welding yinkqubo yokujoyina esebenzisa amandla ombane amakhulu ukunyibilika kunye nokufaka isinyithi esinokusetyenziswa kwisiseko sesinyithi. Iitekhnoloji zayo eziphambili zinokusinceda ukuba sifikelele kumgangatho kunye nomthamo wemveliso esiyilindeleyo kwinkqubo ye-arc welding. Zininzi izibonelelo zerobhothi ye-arc: ulinganiso lwetotshi oluzenzekelayo, ukuqala ukubamba kunye nokuthintela ukuqonda, kunye nokuhlolwa kwangaphambili kwentsimbi kunye nokuhlolwa kwentsimbi.
Ukuzenzekelayo okusekwe kwiRobot kwonyusa ukusebenza kweenkqubo ze-welding kwaye kwenza umbutho wakho ukuba uvelise iindawo ezininzi ngexesha elincinci, ngelixa unciphisa inkunkuma, ukwandisa umgangatho kunye nokuphucula imeko yokusebenza.
Umthengisi omnye, uxanduva olunye.
ILiyuanis ngumboneleli ophambili weerobhothi kunye neephakeji zokuwelda ezipheleleyo. Ukuthengwa kwazo zonke izixhobo kunye nesoftware kumthengisi omnye kwenza lula uku-odolwa kunye nokunciphisa ixesha lokuhanjiswa. Kwaye ngenxa yokuba zonke izinto ziyilelwe kwaye zavavanywa ukuba zidityaniswe ngaphandle komthungo ungazithemba ekusebenzeni kakuhle.
Nokuba yeyiphi na inkqubo yentsimbi oyisebenzisayo, nokuba yi-Arc Welding, i-Spot Welding okanye i-Laser Welding, i-Liyuan inesisombululo esifanelekileyo sokuhlangabezana neemfuno zakho ngqo.